जोसमा होस गुमाउँदा पाउने पश्याताप मात्र हो। | Namuna Nepal
म प्रदेशमा छु।केही बर्ष देखि मैले पोर्चुगललाई कर्मभुमी बनाउदै आएको छु। संसारका ५० भन्दा धेरै देश घुमिसकेको छु। संसारका कुना कुनामा भएका मनिसहरु र तिनका व्यबहारलाई प्रत्यक्ष नियाल्दै आईरहेको छु।
म पनि एक साधारण व्यक्ति हुँ र अन्य व्यक्तिहरु हेर्छु। कहिलेकाहीं त सोच्छु, यदी म जस्तै संसारका सबै मान्छे हुने हो भने किन प्रहरी र हात हतियार चाहिन्थ्यो होला? किन आर्मी बम गोला चाहिन्थ्यो होला ? यो सम्भब त छैन तर सबै मनिसको मन एकै नहुने रहेछ यो दुनियाँमा ।
अनेक प्रकारका मान्छे हुँदा रहेछन् यहाँ।
यदि कोही मान्छे तपाईंलाई मन पर्दैन भने उसलाई इग्नोर गर्न सिक्नु पर्छ। तपाईंको सामाजिक संजालबाट उसलाई हटाउनु होस् र उसको वास्ता पास्ता नगर्नुहोस् त झगडा नै हुँदैन । मैले आज लेख्न खोजेको के हो भने अस्ती मात्रा एक्काइस बर्षको कलिलो उमेरमा साइप्रस आएका चितवनका एक भाईको आफ्नै साथीले छुरा प्रहार गरी हत्या गरेको छ।
दुई बर्ष पहिला पोर्चुगलमा पनि एक नेपाली दाईको त्यसरीनै नेपालीले नै छुरा प्रहार गरी हत्या गरेको थियो । नेपालमा पनि दैनिकजसो यस्ता किसिमका घटनाहरु सुन्न पाईन्छ। किन यति सम्म गिर्न सक्छ मनिस अझ भनौ विशेष पुरुष।
ठुलो जमात छ यहाँ जसले अर्कालाई गिराउन पाएदेखी खुशी हुने । मनमनै कल्पना गर्नुहोस् त कतै तपाईंपनि यस्तो सोचमा हुनुहुन्छ कि! यदि छ भने पनि त्यसलाई बिर्सेंर, त्यो सोचलाई सकरात्मक बनाउनु होस्। कल्पना गर्नु होस कति खुशी हुन्छ तपाईंको मन!
तपाईं खुशी हुने कि जिन्दगी भर दुखी हुने, यो सबै तपाईंको मिहिनेत र सोचमा निर्भर हुने रहेछ। गलत सोच भएको मान्छे जिन्दगीभर जति धन सम्पत्ति भए पनि खुशी हुन सक्दैन ।
सके झगडानै नगर्ने तर मनमुटाबनै भए पनि मान्छेको हत्यानै गर्ने सोच कताबाट आउछ होला? यो सुन्दा म अचम्म पर्छु। साच्चै संसार बुझिनसक्नुको छ ।
मेरो भनाइ मान्ने हो भने त मनमुटाब र झगडा हुनै नदिनको लागि आफुनै साइड लाग्नु पर्छ। फलानोले यसो गर्यो पख तलाई भन्नु भन्दा ठिकै छनि त मेरो सर्कलमा हुन, मेरो साथी हुन लायकको रहेनछस् भन्ने कुरा मनमनै सोचेर आफ्नो बाटो लाग्ने हो भने यस्ता घटनाहरु सुन्नु पर्दैन थ्यो । जोशमा होस् गुमाउँदा पाउने पश्याताप मात्र हो अरु केही हैन। बलले हैन दिमाग ले काम गर्नु पर्छ ।
पछिल्लाे - नेपाल अपडेट:थप १३ जना कोरोना पोजेटिभ भएको पुष्टि,संक्रमित संख्या १३४ पुग्यो
अघिल्लाे - दक्षिण कोरियाका नेपाली पत्रकारमाथि लक्षित क्रियाकलापको महासंघद्वारा भत्सर्ना